Khabib Nurmagomedov oo noqday xiddiga ciyaaraha caalamka ee sanadkan ee BBC-da - Tilmaan Media
Khabib oo ah muwaadin u dhashay dalka Ruushka oo 32 sano jir ah ayaa baal dahab ah ka galay tartanka addimo-dirirka kaddib markii guushiisii 29-aad uu kaga badiyay Justin Gaethje bishii bishii Oktobar.
Ninkan ku guuleystay horyaalka miisaanka fudud ee UFC ayaa tartankii addimo-dirirka ee ugu dambeeyay galay bilo uun kaddib markii uu dhintay aabihii Abdulmanap oo ahaa tababarihiisa iyo la taliyihiisa.
Khabib oo dadka qaar ay u arkaan ninka ugu addimo-dirirka wanaasgan ee wakhtigan ayaa tartankaasii ka fariistay isla markii uu ka guuleystay Justin Gaethje, guushaasi oo noqoneyso tii 29-aad ee uu ka soo hooyo tartankaasi.
13 ka mid ah 29-ka jeer ee uu ku guuleystay tartankani addimo-dirirka (Mixed Martial Arts) ayaa guushiisu waxay ahayd mid toos ah oo aan ama wakhti loogu darin ama aan lagu celin ciyaarta.
Wuxuu si wanaagsan u difaacay kaalinta uu kaga jiro tartanka miisaanka fudud muddo saddex jeer ah, waxaana loo arkaa inuu yahay mid ka mid ah ciyaartoyda ugu sarreysa taariikhda tartamada addimo-dirirka.
Khabib Nurmagomedov ayaa tartanka codeynta xiddiga ciyaaraha caalamka ee sanadkan ee BBC-da waxaa uu kaga guuleystay cayaaryahanno ay ka mid yihiin vaulter Armand Duplantis oo reer Sweden ah, ciyaaryahanka kubadda koleyga ee Mareykanka u dhashay LeBron James, Dustin Johnson, ciyaaryahanka kubadda cagta ee Wendie Renard, iyo sidoo kale feeryahanka Katie Taylor.
Tartankan xiddiga isboortiga caalamka ee BBC-da ee sanadkii hore waxaa ku guuleystay Eliud Kipchoge oo muddo afar jeer ah ku guuleystay tartanka orodda dheer ee marathon-ka.